Google Reader si Google Labs | Martech Zone
Sunday, July 23, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Oge agafeela na m ga-ehi ụra. Ma abụghị m. Ana m ata ya ụta na Google. Anọ m na-achọpụta njikọ ụfọdụ na-edegharị blọọgụ m na Google Analytics wee bịa: http://www.google.com/reader/view/
Ekpebiri m ịhụ ihe njikọ ahụ dị ka m wee tụba ya na ogwe adreesị m. Obi dị m ụtọ na m mere otú ahụ! Gugulu aruola obere ihe na ntaneti web a. M na-etinye ndenye aha m niile n'ebe ahụ na blọọgụ niile m na-enyocha kwa ụbọchị. Google na-eme ezumike. Ọ na-enyocha ihe ndenye m gụrụla na nke m na-agụghị. Ọ na-enyekwa m ohere ịkọ nri m. Nke a bụ usoro nhazi usoro maka faili ntanetịime gị. I nwekwara ike itu otu kpakpando na ntinye nke masịrị gị.
A web dabeere feedreader dị ukwuu m ebe m na-agụ ma na-arụ ọrụ ma n'ụlọ. Na na na, ọ bụghị ihe ọjọọ. Ọ bụghị n'ezie ihe ọ bụla dị oke egwu ị na-ekwu…
Enwetara m Freakonomics na The Long Tail taa mana amabeghị ha. M ga-anọ na ha echi!
G'night onye obula!
Jul 26, 2006 na 7: 00 AM
OK, ị nwetara m. Ugbu a, m ga-aga lelee Google Reader!
Apr 21, 2007 na 4: 02 AM
hụ gị… daalụ, ọ dị mma ịnata okwu ndị dị mma.:
[URL=http://www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3–23] elekere oyiri[/URL] [URL=http://www4.gu.edu.au/cgi- bin/netforum/artspg/a/3–2]zụta ultram online[/URL] [URL=http://www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3-29]vicodin online[/ URL] [URL=http://www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3–24] Enweghị mbinye ụbọchị ịkwụ ụgwọ fax [/URL] [URL=https://itc.utk.edu/ cgi-bin/netforum/theatre100/a/3–22]akpa akpa oyiri[/URL] [URL=http://www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3–30]frontline gbakwunyere maka nkịta[/URL] [URL=https://itc.utk.edu/cgi-bin/netforum/theatre100/a/3–21]Enwere ego nbinye kredit ọjọọ nke onwe [/URL]
Ọ dịghị faksị ụbọchị ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego mbinye ego nbinye kredit ọjọọ efu Akpa oyiri vicodin online oyiri ese ịzụta ultram online frontline gbakwunyere maka nkịta
Apr 21, 2007 na 10: 01 PM
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie iji ejiji ya, budata ngwa mgbakwunye Stylish maka Firefox wee wụnye isiokwu a - Chaị!